जानि राखौ ! व्रतको समयमा यौन सम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ?::Nepalese News Portal
व्रत वसेको वेलामा सेक्स गर्न हुन्छ की हुदैन ? सवैको चासोको विषय हुनसक्छ । बिशेष गरी तीजको व्रत वस्ने नेपाली महिलाहरूलाई यो चासो बढी हुन्छ । नेपालमा विभिन्न धार्मिक र पैत्रिक अनुष्ठानमा व्रत बस्ने चलन छ । व्रत बस्दा कुनै विशेष खाने कुरा नखाने गरिन्छ । भारत र नेपालमा पनि खासगरी हिन्दु धर्मावलम्बीले ब्रतलाई विशेष महत्वपूर्ण समयको रुपमा श्रद्धा गर्छन् । एकादशी,कृष्ण अष्टमी, तीज जस्ता पर्वमा व्रत बस्ने चलन छ । कतै तीर्थव्रत गर्दा वा कुनै पुजा आजा गर्दा पनि व्रत बस्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ ।
तर यस्तो समयमा दम्पतिले यौन सम्बन्ध राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भने सबैमा अन्यौल देखिन्छ । तर मानसिक रुपमा पवित्र बस्नुपर्ने यो समयमा शारीरिक चन्चलता समायोजन गर्न कठिन हुन्छ । व्रतको समयमा सेक्स गर्न हुन्छकि हुँदैन भन्ने विषयमा बहस गर्नु भन्दा पनि सेक्स कसरी मानसिकरुपमा अदम्य आयाम हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । खासमा व्रतको अवधि कति लामो हो या कति समय व्रत लम्बिन्छ भन्ने कुराले पनि यो समयमा सेक्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । अधिकाँश जोडी व्रतको समयमा पनि सेक्स गर्छन् ।
तर कतिपयलाई भने सेक्स गर्दा व्रत भंग हुने वा पाप लाग्ने डर लाग्छ । लामो समय सम्म चल्ने व्रत हो भने चाँहि शरीरमा उर्जा घट्दै जाँदा सेक्सको चाहाना कम हुँदै जान्छ । यदि तपाइँ धार्मिक व्रत गर्दै हुनुहुन्छ भने सेक्स नगर्नु्स् । धार्मिक अर्थमा व्रत बस्नु भनेको मानसिक मात्र नभएर शारीरिकरुपमा पनि शुद्ध रहनु र सांसारिक गतिविधीबाट पनि मुक्त रहने प्रयास हो । खासमा खाना नै सबै शारीरिक चाहानाको जड हो । जति खाना बढी खाइन्छ त्यति नै बढी सेक्सको चाहाना हुन्छ । सात दिन सम्म सेक्स नगरी बस्नु र अर्को सात दिन खाना नखानुस् कुन गाह्रो हुन्छ आफै अनुभव गर्नु हुनेछ ।
खाना नखाने हो भने सेक्सको चाहाना आफै घट्छ । तर सेक्स कुनै अधार्मिक क्रियाकलाप भने होइन । सबै धर्ममा यौन अनुशासनको कुरा गरिएको छ, तर सेक्सको महिमा पनि सबै धर्मग्रन्थमा छ । सामान्यतया छोटो अवधीको व्रत बस्दा सेक्स नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । तर दिन भन्दा लामो व्रतमा भने सेक्सको चाहाना पनि कम हुन्छ र सेक्स गर्दा पनि हुन्छ । व्रतमा सेक्स गर्दा भोक बढी लाग्छ । त्यसकारण व्रतको समयमा सकेसम्म सेक्स नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।